Dagaal Xoogan Oo Ka Socda Magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal Xoogan Oo Ka Socda Magaalada Muqdisho
Ardaan Yare 26 July 2018
Wararka ka imaanayo Xaafada Kaawa Godeey qeybta Degmada Dharkenley ee Gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegan in halkaasi uu ka socdo daagal u dhaxeya Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda balse u qaab beeleed u abaabulan.
Dagaalkan ayaa waxaa la sheegay in uu bilowday duhurnimadii maanta,waxana la sheegay in uu dhexmarayo Ciidamo kawada tirsan Dowladda Soomaaliya oo la sheegay in ay abaabulan yihiin qaad beeleed,iydoo dagaalka uu sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinc.
Dad Goobjoogayaal ah oo ku sugan halka uu dagaalka ka socdo oo ah Xaafada Kaawa Godeey gaar ahaan halka loo yaqaano Ceel Dhanaanoow ayaa inoo sheegay in Ciidamada dagaalka uu dhexmarayo ay isku-heystaan dhul halkaasi ku yaalla.
Ilaa iyo hada ma jiro wax ah oo kasoo baxay maamulka Degmada Dharkenley ee Gobolka iyo Taliska Booliska Degmadaasi ee ku aadan dagaalka ka socda Degmada Dharkenley ee Gobolka Banaadir.
Maxkamadda CQS Oo Xukun Riday
Somalia: Kenyan forces rape 5 girls near border town